Shir Balaadhan Oo Looqabtay Dhalinyarada Degmada Feerfeer - Cakaara News
Shir Balaadhan Oo Looqabtay Dhalinyarada Degmada Feerfeer
Feerfeer( cakaaranews )Axad 27ka March 2016, Shir ay ujeedadiisu tahay dardargalinta iyo sii xoojinta nabadgalyada iyo horumarka islamarkaana ay kasoo qaybgaleen dhalinyarada degmada feerfeer ayaa saaka ka qabsoomay xarunta degmada feerfeer ee magaalada feerfeer.
Hadaba shirkan ayaa waxaa ugu horayn ka hadlay Madaxa Arimaha Xisbiga Degmada Feerfeer mudane Maxamuud Maxamed Cabdi oo sheegay in dhalinyaradu ay doorka ugu muhiimsan ku leeyihiin taabagalka horumarka iyo nabadgalyada ka hanaqaaday guud ahaan deegaanka gaar ahaana degmada feerfeer. Waxa uuna xusay masuulku in dhalinyartu ay sii xoojiyaan nabadgalyada iyo waliba kaqaybgalka horumarka kasocda degmada islamarkaana hal abuur iyo waxsoosaar ay la yimaadaan.
Dhanka kale waxaa isna kahadalay shirkan Madaxa Xafiiska Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Degmada Feerfeer Cabdikhadar Shaafici oo sheegay in dhalinyardu ay yihiin jiilkii badali lahaa hogaaminta islamarkaana ay ku dadaalaan dhanka waxbarashada iyo waliba sportiga qaybihiisa kaladuwan si ay guulo uga soo hooyiyaan tartamada degaanka iyo dalkaba kadhacaya ee dhanka sportiga islamarkaana xafiisku uu lagarab taaganyahay taageero buuxa.
Ugudanabayna waxaa iyaguna dhinacooda kahadlay dhalinyaradii kasoo qaybgashay oo sheegay inay aad ugu faraxsanyiin shirkan uu maamulka iyo xafiiska dhalinyaradu u qabtay waxayna sheegeen in ay u soo jeediyeen codsiyo iyo waliba mahadcelin sida ay ula garab taaganyihiin waxyaabihii ay u baahnaayeen sida haday tahay goobihii mada daalada iyo waliba dhisida iskaashatooyinkii waxsoosaarka. ugudanabayna waxay balan qaadeen inay kashaqaynayaan nabadagalayada iyo horumarka labadaba.